Ebee ka ị zoro ọgwụ ụmụaka?
Ndị na-ahụ maka ihe omimi maara na ihe dị ka ọkara nke ikpe nile nke nsị ụmụaka bụ nsị n'ihi nsị nke ụdị ọgwụgwọ dị iche iche. Ọtụtụ mgbe, ụmụaka na-eri ọgwụ ndị fọdụrụ na ihe ndozi nke okpokoro, n'ụgbọ mmiri; mgbe ụfọdụ, enwere ọnọdụ mgbe ndị okenye onwe ha na-enye ụmụ ọgwụ maka egwuregwu ahụ.
Eleghi anya, onye ọ bụla n'ime anyị gọrọ ọnụ ọ dịkarịa ala otu ugboro, ọ naghị achọpụta nke a ma ọ bụ ọgwụ ahụ, karịsịa nke mbubata. Ọfọn, onye na-akàrà? Ma nke kachasị mkpa, gịnị mere? Ma eziokwu ahụ bụ na ndị okenye yiri ihe nhụjuanya na-enweghị isi, n'eziokwu, onye na-emepụta ọgwụ ahụ maara nke ọma - ọgwụgwọ ekwesịghị ịmeghe nwa ahụ!
Ndị nwere obere ụmụaka, ndị dọkịta na-ahụ maka nsị na-ajụ ka ha cheta iwu nchekwa ndị a:
• Mgbe ọ bụla ojiji nke ọgwụ ahụ, lelee iji hụ ma ọ bụrụ na emechiri ya nke ọma. Ọbụna nkpuchi nchedo "nchebe" anaghị abụ mgbe niile ihe nchebe nke nchekwa;
• Were ọtụtụ mbadamba dị ka ịchọrọ iwepụta na ngwugwu ahụ, ọ bụghị abụọ maọbụ ugboro atọ tupu oge;
• Echekwala ọgwụ n'ime ụlọ ebe ụmụaka na-egwuri egwu. Ebe ọjọọ maka ịchekwa ọgwụ bụ igbe dị na closet (ọ nwere ike ịkụpụ ya na bọl) n'ụzọ dị mfe - nke a bụ ihe ndị nne na nna ochie mere ka ha ghara ichefu ịṅụ ọgwụ;
• Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere ọchịchọ ịmata ihe, adịghị echekwa ọgwụ na akpa, akpa, akpa na akpa nkata;
• Ọ kacha mma iji chekwaa ọgwụ na ebe ọ bụ na nnukwu nwatakịrị apụghị ịhụ ha, obere obere enweghịkwa ike iru ya;
• Ejila ụmụaka na-aṅụ ọgwụ, ha na-enwe obi ụtọ ịṅomi ndị okenye. N'ịbụ onye na-akpọ "isi ọwụwa," nwatakịrị ahụ nwere ike ịnọ n'ụlọ ọgwụ;
• Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na-arịa ọrịa, ekwela ka ọ ṅụọ ọgwụ n'onwe ya. Naanị n'aka gị;
• Akwụsịla ka ụmụaka nwee sweets ma ọ bụ swiiti na ụmụaka. Mgbe ị na-anọghị, nwatakịrị ahụ ga-echeta na ebe dị nso n'ebe ahụ, e nwere "sweets" ma malite ịchọrọ ha nke ọma.
Otu esi kụziere nwatakịrị ka ọ nọkwasị n'ụgbọala
Nwatakịrị nke dị afọ 1 anaghị ekwu okwu
Kedu ka esi agwa nwatakịrị banyere nna na-ahapụ ezinụlọ ya
Egwuregwu ụmụaka maka ụmụaka dị n'okpuru afọ 1
Mmepe okwu nke nwatakịrị nọ n'ụlọ
Omume nke nwatakịrị nọ na tebụl
Ịzụlite ụdị onye nwatakịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ ọta akara
Etuziri umu nwanyi
Ụdị ejiji na ntutu isi
Green tomato maka oyi - ntụziaka na foto Fingers lick, salted na pickled, na Korean, salad na-enweghị sterilization
Obi nkoropụ na ndụ ndị nne na nna n'ọdịnihu
Stewed kabeeji na mushrooms
Otu esi esi jikwaa oge ma ọ bụ njikwa oge maka nwunye nwanyị nke oge a
Kedu nzọụkwụ ole ị ga-achọ iji calorie ọkụ?
Kedu otu ị ga-esi amanye onwe gị ịlele ọdịdị gị?
Ụdị tii dị iche iche na uru ha bara
Ndị na-acha odo odo na ndị na-agba chaa chaa nke Hollywood
Olee otú ị ga-esi eji akwa ọla mgbe 30: soro 4 iwu dị mfe!
Cocktail "Obodo na ice cream"
Ụdị ihu anụ na nlekọta kwesịrị ekwesị
Ksenia Sobchak "vparivaet" Fans ajụjụ akpụkpọ ụkwụ
Di na nwunye adighi n'adighi nwoke ma obu nwanyi
Baked kabeeji na pearl barley na mushrooms